Amaqhinga kunye neendlela ezimfutshane ekunokwenzeka ukuba ubungazi | IPhone iindaba
UCarlos Hernandez-Vaquero | | Izaziso, Ezahlukeneyo
Yazi inombolo yakho ye-IMEI
Ngokucofa * # 06 # uyakufumana inombolo yesazisi eyahlukileyo kwihlabathi.
Ukufikelela ngqo kwiintandokazi
Ukucofa kabini kwiKhaya kuya kukusa ngqo kwiintandokazi (ngokungagqibekanga, kuyaqwalaselwa kuseto).
Buyela phezulu kwi-Safari
Amaxesha amaninzi kwenzeka ukuba sikwiphepha elide kakhulu kwaye ukubuyela phezulu kuyacotha kakhulu ukuhambisa umnwe. Inketho ebukekayo kukuchukumisa kancinci ngomnwe wakho apho ubeka khona ixesha phezulu. Iluncedo kakhulu.
Ukuba ufuna ukufikelela kwiphepha lewebhu elinjenge "www.manolopagina.com" ngokuchwetheza "manolopagina" Safari izakufikelela ngqo kwisizinda esichanekileyo. Sebenzisa uncedo lwe-injini yokukhangela yeGoogle, ngoko kufuneka isetyenziswe njengenjini yokukhangela ngokuzenzekelayo.
Nyanzela isicelo esisondeleyo
Ukuba isicelo sivaliwe kwaye akukho mntu usisusayo, zama ukucofa iqhosha lasekhaya malunga nemizuzwana eyi-8-10.
Hlela kwakhona ngesoftware
Ukuba ukunyanzela usetyenziso ukuvala akusebenzi okanye ufuna nje "ukuseta kwakhona njenge-esile", cinezela iqhosha le- EKHAYA kwaye ucofe iqhosha / ucime ngaxeshanye imizuzwana embalwa de icime.
Ngokufutshane cofa iqhosha laseKhaya kunye neqhosha lokucima / ukucima. Iya kugcinwa kuluhlu lweefoto.
Faka ikhefu kucofa ucofe ngokuzenzekelayo
Ikhefu linokufakwa kundayalo oluzenzekelayo lwe-iPhone ngokuchwetheza ikoma. Ke, umzekelo, ukongezwa kunokufikeleleka ngokuthe ngqo ngaphandle kokucofa ngesandla. Ii-comas zinokudityaniswa kunye ukuze kwandiswe ikhefu.
Khetha i icon yewebclips
Xa ugcina i-webclip, i-icon ezenzekelayo ngokuzenzekelayo ngumfanekiso owubonayo kwiphepha lewebhu. Ngale ndlela, ukuba usondeza umzekelo kwilogo yephepha kuya kuba ngcono kakhulu. Kumaphepha afana noGoogle ayisebenzi kuba sele benayo i-icon yabo.
Imisebenzi emininzi yeminqwazi
Ii-headphone ze-iPhone zoqobo zinemisebenzi ephantse yafihlwa eyenza ukuba kungafuneki ukuba ikhuphe iselfowuni epokothweni. Ngomculo zithandwa kakhulu (1click: play / pause, double click: advance song, triple click: rewind song), kodwa kwiminxeba kunzima ukuzilinga embindini wefowuni. Imisebenzi yile:
Cofa u-1: Thatha / xhoma umnxeba.
Cofa kabini: Thumela umnxeba kwi-voicemail (andazi mntu eSpain oyisebenzisayo)
1 cofa: Guqula umnxeba ubambe kule ikhoyo kwaye uyibambe.
Bamba imizuzwana emi-2: Ungayihoyi ifowuni yokulinda.
Ukukhangela ngokukhawuleza kwiimephu zikaGoogle
Ukuba unayo idilesi yomfowunelwa ochaziweyo, xa uyichukumisayo, iimephu zikaGoogle ziyavula, zikubonise indawo omfowunelwa kuyo.
Thula okanye uyala umnxeba
Ukuba uxakekile kwaye awufuni okanye ungathatha umnxeba ungacofa iqhosha lokucima / lokucima kube kanye kwaye lizakuthuliswa. Ukucinezela kwakhona kuya kurhoxisa umnxeba.
Nika amandla ukutshixa. Mayus.
Cofa nje kabini kwiqhosha lokushiya (utolo oluphezulu).
Ukuhamba kancinci kwiividiyo
Misa ividiyo kancinci kancinci ucofe uye phambili.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » iPhone » Ezahlukeneyo » Amaqhinga kunye neendlela ezimfutshane ekunokwenzeka ukuba ubungazi
Siyavuyisana nesi sithuba kuphela, kodwa zonke iiposti ezintsha ozibhalayo, kubonakala kum ukuba iwebhu inikwe amandla kwaye yiyo loo nto ndifuna ukuvuyisana nabo bobabini abajongene namanqaku kunye neActualiphone sebenza.
Ndicinga ukuba akukho sisombululo kumbuzo wam, kodwa ndiza kuwushiya apho, mhlawumbi ukuba ndenza njalo, ndingathanda ukwazi ukuba ngaba kukho umyalelo wokufihla igama lam ngexesha lokufowuna, ndizamile # 31 # kwaye ayisebenzi, ndizamile iisetingi kwaye, kwaye ndingafowunela imovistar kuphela, kodwa ukuba bayayifihla, ihlala isigxina kwaye ayinjalo kwimeko yam, kuphela kwiminxeba ethile, ihlala isebenza kubaxhasi, abangafuni ukwazi Inombolo yeselfowuni kwaye ndifuna ukuba batsalele iiofisi.
Enkosi ngexesha lakho kwaye kwakhona ndiyavuyisana nani nonke enenza le webhusayithi.
Gqabaza nje ukuba i-webclip iyabanjwa okoko i-web ingenayo 'i-apple-touch-icon' echaziweyo
Kwaye ii-caps lock kufuneka ziqwalaselwe kuseto-ngokubanzi-ikhibhodi ...
UCarlos Hernandez-Vaquero sitsho
flcantonio, ndizamile iphone yam kwaye iyandisebenzela ubuncinci ekhaya # 31 # 98 ... Kwaye ndifumana umnxeba ofihliweyo, ke kufanele ukuba ibe yinto kaMovistar (ndinguVodafone). Konke okugqibelele.
Phendula uCarlos Hernández-Vaquero
Ukuba ulungile ngokuchanekileyo, isebenzela ivodafon, kodwa ingeyiyo eyemovistar, lihlazo, ngokwenene.
Enkosi ngokuphendula, ukuwola kwaye ukuba ufumanise iqhinga ndingathanda ukulazi
NDIFUMANA IIFONI EZISUKA KWINOMBOLO ETHI SEZIFIHLIWEYO, NDINGAZI NJANI UKUBA LILIPHI INANI ABANDIPHAWULA. YIPHONE3